काठमाडौँ । भारतको पूर्वोत्तर राज्य असमकी साहित्यकार रूमी लस्कर बोराद्वारा असमिया भाषामा लिखित तथा डा. सरिता शर्माद्वारा अंग्रेजी भाषामा अनूदित उपन्यास ‘डम्फु’ काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ । लेखिका बोरा र अनुवादिका डा. शर्माको उपस्थितिमा बागबजारस्थित सिटी म्याक्स सिनेमाघरमा नेपाली वाङ्मय परिषद्द्वारा आयोजित समारोहमा प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराईले उक्त कृतिको विमोचन गरेका थिए ।
विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रा.डा. भट्टराईले उपन्यासमार्फत लेखिका बोराले नेपाल–भारत अन्तरसम्बन्धबारे एउटा सिर्जनात्मक आयाम थपेको बताए । उनले अनुवादको महŒवमाथि प्रकाश पार्दै अनुवादिका शर्माले अनुवाद साहित्यमा उल्लेखनीय योगदान दिएको दाबी गरे ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अनुवाद विभाग प्रमुख प्राज्ञ प्रा.डा. उषा ठाकुरले लेखिका बोराद्वारा असमिया भाषामा लिखित उपन्यासलाई अनुवादक शर्माले अंगे्रजी भाषामा अनुवाद गरेर विश्वव्यापीकरण गरेको बताइन् । प्रा.डा. ठाकुरले ‘डम्फु’ उपन्यास अब्बल लागेको धारणा राखिन् ।
कवि तथा किराती सौन्दर्य चिन्तक भूपाल राईले लेखकले मातृभाषामै लेख्दा राम्रो हुने तर अनुवादका माध्यमबाट त्यसलाई विस्तार गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कवि तथा समालोचक सुरेश हाचेकालीले लेखिका बोराले ‘डम्फु’ उपन्यासमार्फत नेपाल र असमको अन्तरसम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताए । उनले असमियाभाषी असमिया नागरिकले तामाङ समुदायको परपम्परागत मौलिक बाजा डम्फुलाई केन्द्रमा राखेर लेखेको उपन्यास ‘डम्फु’ले विश्वमा रहेका समस्त नेपाली डायास्पोरिक समुदायलाई गौरव महसुस गराउने विचार व्यक्त गरे । उनले लेखिका बोरा यसकारण धन्यवादको पात्र भएको जिकिर गरे ।